Rikoooo.com - Nakatona ny motera Project Airbus A321 taorian'ny fiaingana
Ny tetikasa Airbus A321 tetikasa dia nakombona taorian'ny fisintonana
Lahatsoratra tsy mbola novakiana • Lahatsoratra 9 • Pejy 1 of 1
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by JanneAir15 » 19 feb 2017, 07:55
Salama! Navoakako ny Airbus A320 Family Mega Pack. Nandinika ny modely rehetra aho (A318, A319, A320, A321) fa rehefa miala amin'ny A321 dia natsahatra ny milina avy hatrany rehefa vita ny kodiarana. Ny fiaramanidina hafa amin'ity kitapo ity dia tsy manana io olana io afa-tsy amin'ny A321. Nanaraka ny lisitry ny fanamarinana aho ary namadika ny milina tamin'ny fomba tsara. Tsy fantatro izay ratsy. Mba ampio aho azafady.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 19 feb 2017, 08:35
Tsy afaka manao zavatra be aho fa eo antenatenan'ny sidina iray rehefa miresaka (LFRG - KDFW) ao amin'ny 747-400LCF, fa raha vantany vao teraka aho dia haka izany ary hijery izany.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Tonny0909 » 19 feb 2017, 10:50
Tokony hametraka ELAC2 Off ao amin'ny FLT CTL- fizarana eo amin'ny tontonana ambony. Ny telo hafa napetraka ON. (Sec 2,3 sy FAC2)
Ary ianaro ny Lalànan'ny sidina Airbus:
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by JanneAir15 » 19 feb 2017, 11:56
Misaotra indrindra anao! Handramako izany.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by JanneAir15 » 19 feb 2017, 12:23
Tsia, tsy mandeha izany. Mbola nahazo ihany ilay lesoka "Generator 1, Generator 2 ary Hydraulika 1 # 2" mitovy amin'ny mena amin'ny fampisehoana info.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by JanneAir15 » 19 feb 2017, 13:39
Tsy ilaina ny fanampiana intsony! Nanamboatra ilay olana aho. Tonny0909, marina ianao saingy ny ELAC2 no hany fitaovana CTL CTL izay tsy maintsy atomboka. Ny fitaovana hafa tsy maintsy anananao! (anisan'izany ny ampahany havia amin'ny tontonana ambony) Izany tokoa! Nefa misaotra anao noho ny fanampianao Tonny0909.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Tonny0909 » 19 feb 2017, 14:50
Tsara lazaiko tao amin'ny lahatsoratra niandohany:
"Telo hafa napetraka ON. (Sec 2,3 sy FAC2)"
Mandeha izy ireo rehefa tsy voalaza ny "OFF".
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 19 feb 2017, 15:39
Soa ihany fa nahita ity iray ity. Raha mbola mila zavatra hafa ianao, ampahafantaro anay.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 19 feb 2017, 19:11
Dariussssss nanoratra hoe: Soa ihany fa nahita ity iray ity. Raha mbola mila zavatra hafa ianao, ampahafantaro anay.
Izaho ilay faharoa!
Misaotra anao ry Tonny0909 noho ny fanampiany!
Lahatsoratra 9 • Pejy 1 of 1